Farewell kuna David Gistau, mutori venhau uye munyori. Mabhuku ake | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo waDavid Gistau: (c) Bernardo Díaz, anobva kuEl Mundo.
David gistau, mutori wenhau uye munyori, akashaya nezuro mushure memwedzi miviri mukoma nekuda kwe kukuvara kwehuropi akatambura achidzidzira mutambo wake waanofarira, iyo tsiva. Uye nezuro manheru pandakaziva -vashoma vaiziva nezve mamiriro ake- Ini handina kana kukwanisa kudzivisa kushamisika kutanga, uye hasha neshungu gare gare. Nekuti Ndakaiverenga, ndokuteerera uye ndakayemura.
Kune ake masitayera, kupinza kwake uye bonhomie, kwake kusununguka kwekutaura, kwake kwehunyanzvi uye kwakapinza chiito izvo, kune vanhu vasingazvizive zvinonzwika seni, zvaive zvinofadza. Nhasi Ndinozviona zvakaoma kunyora ichi chinyorwa, asi zvakakodzera kurodha pasi kusuwa uye kufunga kuti iyi prose ichagara isina kuchinjika mairi zvinyorwa y mabhuku uyo akanyorawo. Zorora murugare.
2 Mabhuku avo
Saka zvinhu zvakawanda zvakanyorwa (uye ndatoverenga) uye kune vakawanda kwazvo uye vakanaka veavo vaaishanda navo pamusoro paDavid Gistau, uye mumaawa mashoma mushure mekunzwa nhau dzerufu rwake, kuti ini, munyori anozvininipisa webhuku rino rekunyora, usashinga kupindura uye ndoda kuenzanisa. Ini ndinogona chete kuwedzera imwe chikamu chemiriyoni kwavari semuverengi, muteereri uye anoyemura naGistau.
Sei chirevo chake chakandifadza rimwe zuva kuverenga imwe yezvinyorwa zvake mu Chikonzero, mushure me ABC uye ikozvino mu Nyika. Uye sei mushure Ndakatanga kuiteerera pana Onda Cero (zvese mukuungana kwemangwanani uye muzvirongwa zvakaita se Tsika), iyo COPE -mangwanani naCarlos Herrera- uye mune dzimwe nzvimbo dze Kanyanga 3 sezvazvino mu Telecinco.
Ndakaramba ndakamubata kureruka toni, kwake kuziva kusvetuka kubva kune imwe nyaya kuenda kune imwe kunyangwe yaive yezvematongerwo enyika, cinema, tsika nemagariro, mutambo kana mumhanzi- pasina kurasikirwa neota yekupinza uye kushandiswa kwemashoko akakwana uye zvirevo na a agility zvinotyisa. Uye zvakare, takagovana mimhanzi yedombo, timu yenhabvu uye kufarira kushoma kwekufamba-famba uye kutaura kwakarurama mune zvematongerwo enyika kana chero kupi.
Kugadzikana uko, kupfuura shanje, kwakandishamisa ndosaka ndakamuyemura zvakanyanya. Uye izvo hunhu husina hunyanzvi uyo akaratidzirawo nemuviri wake wakasimba, zvakare weangu chaiwo kuravira, kuti ini handisi chidhori chine sutu netayi. Zvakare, aibva kukirasi yangu, kubva pazera rangu rechimakumi manomwe. Saka kana a shasha shamwari, iyo mhando yaunodzidza kubvaKunyangwe iwe wanga usingamuzive, iwe unofanirwa kugara uchimuonesa. Uye Gistau akakunda. Asi anga aine zvakawanda zvasara ...
Nekuti unozviona izvozvo mamwe makoramu mupepanhau aive madiki kudiki kune chiito chakatsvinda uye chakanatswa, uyo asina kuroora chero munhu, chero zvavanotaura. Aive nenyaya dzekutaura asingaregi, uye izvo zvaaifarira, sevanyori vese vanotora kubva patiri kana isu tine shungu nechimwe chinhu. Chinhu chaGistau chaive tsiva. Zvakare Real Madrid, John Ford, Harley Davidsons kana iyo Mafia mumativi ayo ese. Mutsiva, uye zvimwe zvakazoitika tsaona yapfuura yemudhudhudhu muArgentina, nyika yekumusha kwemukadzi wake, akapedzisira amurova achifa zvisina tsarukano.
Uye kune tsiva akakumikidza yake Yakadzika kurova, kwaakaungana mune yekurovedza muviri murairidzi atodzoka kubva kunenge zvese, nemuterevhizheni anotsvaga kudzoka kuzuva uye gororo kubva pasi pevhu anotonga zvese nemunhu wese.
Su kutanga fue Nekuti hapana mazai, nezve zvakaitika kwavari se mutori wenhau rookie muhondo Afuganisitani. Inoteverwa ne Chii chauri kutiitira, ZP?, kwaakashoropodza zvinetswa zvakanyanya zvehurumende yaJosé Luis Rodríguez Zapatero Y harisati rave gore ndiani akawana wekupedzisira, Vanhu vakaenda.
Dzese dzakakosha kuverenga, asi ndeyekusimbisa yekupedzisira yakasaina weIrish, Bhaisikopo raMartin Scorsese nezve avo mabhinya vaaida zvakanyanya; Y nhasi inotyisa sekufamba kwayo Kubva kuMartini kuenda kuMeconium, yakanyorwa makore gumi apfuura mushure mekuva baba kekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Farewell kuna David Gistau, mutori venhau uye munyori. Mabhuku avo
Jose A. Alvarez Alija akadaro
Tsitsi uye kurwadziwa kwakadzika mumoyo.
Kutanga, uye makore mazhinji apfuura, akandikunda nepeni yake uye ndikamutevera kuburikidza nenzvimbo dzese dzaakapfuura, ndichisiya mavari bonhomie nebasa rakanaka. Zvishoma nezvishoma, ndakamunzwa ari pedyo, sechinhu changu, sekunge aive mhuri yangu, seshamwari yangu yepamwoyo. Nhasi shamwari yandisiya. Mwari ave newe mukubwinya kwake, kana Mwari ariko uye nekubwinya kwake futi.
Pindura kuna José A. valvarez Alija
Ini ndinogovana shungu nemanzwiro akafanana. Ini ndatozvitaura muchinyorwa. Uye ichokwadi. Ini ndinofunga David Gistau aive nevaverengi vake vese nevateereri seshamwari dzedu. Ticharisuwa zvakanyanya.